Codbixintii doorashada madaxtinimada Somaliland oo saaka ka bilaabatay, gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Somaliland – Radio Daljir
Noofember 13, 2017 7:08 b 0
Saaka oo Isniin ah Somaliland waxaa ka bilaabatay codbixintii doorashada madaxtooyada Somaliland taasoo ay ku tartamayaan saddex musharrax oo kala matalaya saddexda xisbi siyaasadeed ee Somaliland, kuwaasi oo kala Muuse Biixi Cabdi oo ah xisbiga talada haya ee Kulmiye, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo ah xisbiga mucaaradka ah ee Waddani iyo Faysal Cali Waraabe oo isna ah musharraxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID.
Saddexdaasi musharrax ayaa u tartamaya codadka dad ka badan 700,000 oo kun, kuwaasi oo qaatay kaarar codbixinta, inkastoo loo badinayo tiradu in ay intaas hoos uga dhacda maadama badanka sida dadku ay isku diiwaangeliyaan ama u qaataan kaararka codbixinta aysan u codaynin duruufo kala duwan oo jiri kara dartood.
Saaka waabarigii hore ayaa la furay goobaha codbixinta Somaliland, iyadoo meelo kala duwan oo magaalada Hargeysa ay ka mid tahay la arkayo codeeyayaasha oo safaf dhaadheer ku jira si ay codkooda u dhiibtaan, una doortaan madaxweynaha cusub ee maamulka Somaliland uu yeelanayo shanta sano ee soo socota haddii uusan si kale kulumin kursigiisa.
Inkasta oo doorasho dadweyne ama qof iyo codkiis oo ka dhacda Somaliland aysan ahayn markii koowaad misna doorashadaan ayaa ka hab iyo hannaan duwan doorashooyinkii la midka ahaa ee Somaliland ka dhacay, marka laga hadlayo habka cod dhiibashada iyo xaqiijinta isla lahaanta kaarka codka iyo qofka wata, waxaana xaqiijintaasi ka mid ah sawir ka qaadis ubucda isha ah, taasoo ah nidaam ku cusub adduunka oo dhan.
Deegaannada qaar ay qoondaysay Somaliland in ay doorashadu ka dhacdo, looguna talagalay in laga codeeyo ayaa muran siyaasadeed iyo mugdi ah suuragalnimada sida codbixintu uga dhacayso uu ka jiraa, deegaannadaasi oo ka mid ah gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, murankaasi siyaasadeed oo la xiriira kala sheegashada mulkiyadeed iyo maamul ee Puntland iyo Somaliland, iyadoo xilli horaba labada dhinac ay gobolladaasi ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ah cod-raadin iyo sanaatiikh celin.
Meelaha qaarkood oo gobolladaasi ka mid ah waxaa jirta cabsi-qab la xiriira suuragalnimada isku dhacyo yimaada, inkastoo walwalka arrinkaasi uusan ahayn mid weyn ama waafi ah marka lagu dhereriyo codbixinno iyo doorashooyin kuwaan oo kale ah oo horay uga dhacay Somaliland, kuwaasoo imaanayey xilli ay sidaan oo kale u taagnaayeen murannada siyaasadeed u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland, kuna salaysan xagga dadka iyo deegaanka.
Lixda maqribnimo ee caawa oo Isniin ah ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo codbixinta, lana soo xiro goobaha codbixinta, iyadoo natiijadana lagu wado in lagu dhawaaqo isla habeenimada Isniinta oo ah maalinkii ay dhacday codbixinta doorashada madaxtooyada Somaliland.